Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Shuruudaha & Xaaladaha | CAADI
Cusboonaysiinta ugu dambeysay: 10 Sebtember 2018
At stopsafeschools.com, waxaa naga go'an inaan ilaalino asturnaantaada macmiil ahaan iyo booqde ku soo booqda bartayada internetka. Waxaan u adeegsanaa macluumaadka aan kaa aruurineyno si aan sare ugu qaadno adeegyada aan ku siineyno. Waxaan xushmeyneynaa asturnaanta iyo qarsoodiga macluumaadka aad adiga bixisay waxaana u hoggaansannahay mabaadi'da asturnaanta Australia. Fadlan si taxaddar leh u aqri siyaasaddeena asturnaanta.
MACLUUMAAD AYAAN KA XAALIN KARAA
Inta lagu gudajiro booqashada websaydhkaaga ama isticmaalka badeecadaheena iyo adeegyadeena, waxaa suuragal ah inaan helno macluumaadka soo socda ee adiga kugu saabsan: magaca, magaca shirkadda, cinwaanka emaylka, lambarka taleefanka, faahfaahinta kaarka deynta, cinwaanka biilasha, goobta juqraafi ahaan, Cinwaanka IP, jawaabaha sahanka, weydiimaha taageerada, faallooyinka barta internetka iyo gacan ka hadalka warbaahinta bulshada (wadajir 'Macluumaadka Shaqsiga').
Adeegyadeena looma jeedin dadka ka hooseeya 18 mana si ula kac ah ugama uruurin karno Xogta Shaqsiga qof kasta oo ka hooseeya 18. Haddii aan ka warqabno in ilmo ka yar 18 uu inagu siiyey Macluumaad Shaqsiyeed, waxaan tirtiri doonnaa macluumaadkaas sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Haddii aad tahay waalidka ama mas'uulka cunugga oo aad aamminsan tahay inay na siinayeen Xogta Shakhsiyeed oggolaanshahaaga la'aanteed, markaa fadlan nala soo xiriir.
Waad ka fiirsan kartaa, saxi kartaa, cusboonaysiin kartaa ama tirtiri kartaa Xogtaada Shaqsiyeed adiga oo gala koontadaada ama aad isbadallada ku sameysid adiga laftaada ama si toos ah nala soo xiriir si aan sidaas u yeelo.
SIDA AAD U QAATO MACLUUMAADKAADA
Macluumaadka Shakhsi ahaan lagu Garan Karo: Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka aan aruurinay si aan kuugu gaarsiino adeegyadeena, oo ay ku jiraan: kula xiriiristaada, bixinta taageero farsamo, ku ogeysiinta wixii cusbooneysiin ah iyo dalabyo ah, wadaagida waxyaabo waxtar leh, cabiridda qanacsanaanta macaamiisha, baarista dhibaatooyinka iyo ku siinta shaqsi shaqsiyeed. waayo-aragnimada bogga.
Isgaarsiinta suuqgeynta ayaa loo soo diri doonaa kaliya haddii aad codsatay ama aad u qoondeysay. Waad ka bixi kartaa isgaarsiintayada suuqgeynta waqti kasto adoo iska diiwaangeliso ama emayl noo soo dirto dalabkaagana si dhakhso leh ayaa loo fulin doonaa.
Macluumaadka Shakhsiyadeed ee La Aqoonsado: Waxaan sidoo kale u adeegsanaa macluumaadka aan aruurinno foomamka isku darka iyo magacyada si loo wanaajiyo howlaheenna, oo ay ku jiraan: maareynta websaydhkeena, soo saarista warbixinnada iyo falanqaynta, xayeysiinta badeecadaha iyo adeegyadeena, caddeynta baahiyaha isticmaaleyaasha iyo ka caawinta buuxinta baahiyaha macaamiisha guud ahaan. .
Macluumaad kasta oo aad doorato inaad bulshada ka dhigto mid la heli karo, sida faallooyinka blog-ka iyo marag-kaca ee websaydhka, ayaa diyaar u noqon doona kuwa kale inay arkaan. Haddii aad kolba meesha ka saarto macluumaadkan, nuqulada waxaa laga arki karaa boggaga xirmooyinka iyo kaydadka ee bogagga kale ee internetka ama haddii kuwa kale ay koobiyeen ama keydisay macluumaadka.
JOOJINTA IYO AMNIGA MACLUUMAADKAAGA
Waxaan u isticmaali doonnaa habab macquul ah oo dhan si aan u ilaalino sirtaada macluumaadkaaga shaqsi ahaan inta aan gacanta ku hayno ama aan gacanta ku hayno. Dhamaan macluumaadka aan kaa helno waxaa lagu keydiyaa oo laga ilaaliyaa adeegayaasheena aaminka ah isticmaalka aan loo fasaxin ama marin u helin. Macluumaadka kaarka deynta ayaa la sirgareeyaa ka hor intaan la gudbin ka hor oo kaydiyadeena nooguma keydin.
Si ay nooga caawiso bixinta adeegyadeena, waxaan u wareejin karnaa macluumaadka aan kaa aruurino adiga, oo ay kujirto Xogta Shakhsiyeed, xuduudaha dhan ee kaydinta iyo socodsiinta dalal aan Australia ahayn. Haddii Xogtaada Shakhsi ahaaneed loo gudbiyo oo laga hawl galiyo meel ka baxsan Australia, waxaa loo gudbin doonaa oo keliya dalal ay ku jiraan ilaalin qarsoodi oo ku filan.
Waxaan haynnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed illaa iyo inta loo baahan yahay si aan kuu siino adeegyo iyo haddii kale haddii loo baahdo in la raaco waajibaadkayaga sharciga ah, xallinta murannada iyo hirgelinta heshiisyadayada.
Haddii ay dhacdo in la jabiyo amnigayaga oo macluumaadkaaga shakhsiga ah la jabiyey, waxaan si dhakhso leh kuugu soo sheegi doonaa inaad u hoggaansan tahay sharciga ku habboon.
LUUQADAHA IYO BILAASHKA
Kuki waa fayl yar oo lagu meeleeyay biraawsarkaaga internetka kaasoo aruurinaya macluumaadka ku saabsan hab dhaqankaaga biraawsarka. Isticmaalidda buskud ayaa u oggolaanaya degel si uu ugu habeeyo qaabeyntiisa baahiyahaaga iyo doorbidyadaada. Kukiyada ma helaan macluumaadka lagu keydiyay kombiyuutarkaaga ama wax macluumaad shakhsi ah (sida magaca, cinwaanka, cinwaanka emaylka ama lambarka taleefanka). Inta badan daalacashada internetka ayaa si otomaatig ah u aqbala cookies laakiin waxaad dooran kartaa inaad diiddo kukiyada adoo bedelanaya goobaha biraawsarkaaga. Tani waxay si kastaba ha noqotee, kaa horjoogsaneysaa inaad si buuxda uga faa'iideysato degelkeena.
Websaydhadeena ayaa adeegsada cookies si ay u falanqeeyaan taraafikada websaydhada, u fidiyaan wadaagida warbaahinta bulshada iyo jeclaanta shaqeynta waxayna naga caawisaa inaan siino khibrade soo booqda shabakada oo ka wanaagsan. Intaa waxaa u dheer, cookies iyo pixels waxaa loo isticmaali karaa in loogu adeego xayeysiisyo laxiriira booqdayaasha websaydhada iyada oo loo marayo adeegyada dhinac saddexaad sida Google Adwords iyo Xayeysiiska Facebook. Xayeysiisyadan ayaa laga yaabaa inay ka muuqdaan websaydhkan ama boggag kale oo aad booqato.
KU SAABSAN MACLUUMAADKAAGA XISBIYADA SADDEXAAD
Kama iibin karno mana ku iibin doonno macluumaadka shaqsiga ama macluumaadka macaamiisha.
Faahfaahinta Xogtaada Shakhsi ahaaneed waxaa la siiyaa kaliya alaab-qeybiyeyaasha dhinac saddexaad marka uu sharcigu farayo, alaabada ama adeegyada aad soo iibsatay, bixinta lacag bixinta ama si loo ilaaliyo xuquuqdeena, astaamaha ganacsiga iyo xuquuqaha kale ee sharciga. Ilaa inta aan la wadaagey macluumaadkaaga shakhsiga ah adeeg bixiyaha, waxaan kaliya sameyn karnaa haddii qaybtaasi ay oggolaatay inay u hoggaansanto heerarkeenna asturnaanta sida lagu sharxay siyaasaddan asturnaanta iyo iyadoo la raacayo sharciga khuseeya. Qandaraasyadayada aan la leenahay dhinac saddexaad ayaa ka mamnuucaya inay u isticmaalaan midkasta macluumaadkaaga shaqsiyeed ujeeddo kasta oo aan ka ahayn kan lagu wadaagay.
Waxaa laga yaabaa inaan waqti ka waqti u baahan nahay inaan soo bandhigno macluumaad gaar ah, oo ay kujirto Xogtaada Shakhsiyeed, inaan u hoggaansanno shuruudaha sharciga, sida sharciga, qaanuunka, amar maxkamadeed, amar maxkamadeed, amar maxkamadeed, inta lagu guda jiro hawsha sharciga ama ka jawaabista Codsiga wakaaladda xoojinta sharciga. Sidoo kale, waxaan u istcimaali karnaa macluumaadkaaga gaarka ah si aan u ilaalino xuquuqda, hantida ama badbaadada stopsafeschools.com, macaamiisheena ama dhinac saddexaad.
Haddii isbadal ku yimaado xakamaynta mid ka mid ah ganacsiyadaheena (ha ahaato midaynta, iibinta, wareejinta hantida ama haddii kale) macluumaadka macaamiisha, oo ay kujirto Xogtaada Shakhsiyeed, waxaa loo wareejin karaa iibsadaha iyadoo la raacayo heshiiska qarsoodiga. Kaliya waxaan siideyneynaa macluumaadkaaga shakhsiyeed si niyad wanaag ah iyo halka looga baahan yahay mid ka mid ah duruufaha kore.
Degelkan waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaal boggag kale. Xiriirimahaan waxaa loogu talagalay adiga kugu habboon. Xiriirinta websaydhyada xisbiga saddexaad kama dhigna kafaalaqaad ama oggolaansho ama oggolaansho websaydhadan. Fadlan la soco in aanaan masuul ka ahayn dhaqannada asturnaanta ee shabakadaha kale. Waxaan ku dhiirigelineynaa isticmaalayaasheena inay ka warqabaan, marka ay ka baxaan websaydhkeena, inay akhriyaan qoraalada gaarka ah ee degel kasta iyo aruurinta macluumaadka shaqsiga lagu garan karo. Nidaamkan asturnaanta wuxuu quseeyaa oo keliya macluumaadka ay soo aruurisay websaydhkan.
ISBEDELKA SIYAASADDA SIYAASADA
Maaddaama aan qorsheyneyno inaan hubinno in siyaasaddeenna asturnaanta ay sii ahaato hadda, siyaasaddan waa la beddelan karaa. Waxaan u baddali karnaa siyaasaddan wakhti kasta, annaga oo ah go'aankeenna kaliya oo dhammaan wax ka beddelka ayaa si dhakhso leh u dhaqan galaya markii aan dhajinno wax ka beddelka websaydhkan. Fadlan ku soo laabo xilli xilli ah si aad u fiiriso siyaasaddeena asturnaanta.
Haddii aad wax su'aalo ah ama walaac ah qabtid wakhti kasta oo ku saabsan siyaasaddeena asturnaanta ama isticmaalka Xogtaada Shaqsiyeed, fadlan nala soo xiriir at https://www.stopsafeschools.com/contact waxaanan kaga jawaabi doonnaa saacadaha 48 gudahooda.
FADLAN AKHRISTA SHURUUDAHA IYO SHURUUDAHA ISTICMAALKA AMAANKA KA DUWAN INTA ISTICMAALKA Websaydhkan.
Ku soo dhowow boggayaga internetka. Haddii aad sii wado raadinta iyo adeegsiga degelkan waxaad oggolaaneysaa inaad adeecdo oo aad ku xaddido shuruudaha soo socda iyo shuruudaha adeegsiga, kuwaas oo ay weheliso siyaasaddeena asturnaanta iyo diidmada bogga. stopsafeschools.comXiriirka uu la leeyahay adiga oo la xiriira isticmaalka boggaan.
Adigoo adeegsanaya websaydhkan, waxaad muujineysaa aqbalaadda shuruudahan iyo shuruudaha adeegsiga. Ujeeddooyinka shuruudahan iyo shuruudahan, "annaga", "Our" iyo "Waxaan" waxaa loola jeedaa stopsafeschools.com iyo “Adiga” iyo “Adiga” waxaa loola jeedaa adiga, macmiilka, booqdaha, adeegsadaha websaydhka ama qofka adeegsanaya bartayada internetka.
Waxaan xaq u leenahay inaan badalno, wax ka bedelno, ku darno ama aan ka saarno qeyb ka mid ah shuruudahaan waqti kasta. Fadlan hubi shuruudahan si joogto ah kahor isticmaalka boggayaga internetka si aad u hubiso inaad ka warhayso wixii isbeddel ah. Waxaan isku dayi doonnaa inaanu kuu iftiiminno wixii isbeddel ah oo la taaban karo ama muhiimad kuu leh adiga intii suurtagal ah. Haddii aad dooratid inaad isticmaasho websaydhadeena markaa waxaan u qaddarin doonnaa adeegsigaas caddayn dhammaystiran oo ku saabsan heshiiskaaga iyo oggolaanshaha in shuruudahan ay xukumaan adiga iyo stopsafeschools.comxuquuqda iyo waajibaadka midba midka kale u leeyahay.
Waa shuruud horudhac u ah adiga oo adeegsanaya websaydhka inaad oggolaato oo aqbasho taas stopsafeschools.com sharci ahaan mas'uul kama ahan wixii khasaare ah ama waxyeelo ah ee kugu soo food leh oo la xiriira isticmaalka boggaaga, hadey jiraan khaladaad ama ka tagis dukumiintiyadayada ama macluumaadkeena, wixii alaabo ama adeeg ah oo aan ku bixin karno ama isticmaal kasta oo websaydh ah. Tan waxaa ka mid ah isticmaalkaaga ama ku tiirsanaanta wax kasta oo dhinac saddexaad ah, xiriiriyeyaal, faallooyin ama xayeysiis. Isticmaalkaaga, ama ku tiirsanaantaada, wixii macluumaad ah ama agab ee websaydhkan gebi ahaanba adiga ayaa qatar kuu ah, taas oo aan annagu mas'uul ka noqonayn doonin.
Waxay noqon doontaa masuuliyadaada inaad hubiso in alaabada, adeegyada ama macluumaadka laga heli karo websaydhkan ay ka soo baxaan shuruudahaaga, shaqsiyaadkaaga gaarka ah. Waxaad qiraysaa in macluumaadka iyo agabyada noocan oo kale ah ay ku jiri karaan khalad ama khalad waxaanan si cad u sheegaynaa inaan ka saarayno mas'uuliyadda wixii khaladaad ah ama khaladaad ah illaa inta sharciga uu oggol yahay.
Xiriir iyo wada-shaqeyn
Ujeeddooyinka Jadwalka 2 ee Sharciga Macaamiisha Australiya, gaar ahaan Qaybaha 51 illaa 53, 64 iyo 64A ee Qaybta 3-2, Qaybta 1, Qayb-hoosaadka A ee Tartan iyo Xeerka Macaamiisha 2010 (Cth), stopsafeschools.comWaajibaadka saaran wixii jabin kara muddada heshiiskani wuxuu ku xaddidan yahay: keenida alaabta ama adeegyada adiga mar labaad; badelaada alaabta; ama bixinta kharashka haysashada badeecada ama adeegyada oo mar kale laguugu soo diray.
Waa inaad ka weynaataa da'da '18 sano' si aad u isticmaasho websaydhkan oo aad u iibsato alaabo ama adeegyo.
Alaabada jireed waxaa keeni kara Australia Post iyo / ama shirkadaha kale ee sumadda summada u leh. Gaarsiinta ayaa loo shaqeeyaa si dhakhso leh marka la helo lacag bixin buuxda. Gaarsiintu waxay qaadan kartaa inta u dhaxaysa 2 iyo 14 maalmood, iyadoo kuxiran xulashada gudbinta. Amarada waxyeellooba ama lumay waa in lagu xalliyaa Australia Post ama shirkadda xareeyaha si toos ah anaguna mas'uul kama nihin badeecada ku waxyeelowday safarka ama aan la helin. Bedelka alaabada wax xumaatay ama luntay waxaa lagu sameeyaa ikhtiyaarka stopsafeschools.com.
Alaabada dijitaalka ah ayaa markiiba la keenaa. Fadlan la soco in ay jiraan qataraha hal abuurka ah ee la xiriira soo dejinta softiweer kasta iyo alaabada dijitaalka ah. Haddii aad wax dhibaato farsamo ah kala kulanto inaad soo dejiso agabkeenna, fadlan nala soo xiriir si aan iskugu dayno inaan ku caawino.
LACAG LA'AANTA IYO CIIDAMADA
stopsafeschools.com waxay gacanta ku hayaan soo celinta iyo habraaca lacag celinta iyadoo la raacayo sharciga Ilaalinta Macaamiisha Australia.
Haddii aad jeceshahay inaad soo celiso dalabkaaga, fadlan nagu soo wargeli gudaha maalmaha iibka oo leh sabab macquul ah oo lagu soo noqdo. Haddii aynaan awoodin inaan xallinno cabashadaada ama aan sii caawinno, waxaan ku dhaqaaqi doonnaa soo-celinta lacag bixinta markii la hellay badeecadihii la iibsaday. Alaabada aan daahsan ayaa loo soo celin doonaa si buuxda. Lacag celinta si dhakhso leh ayaa looga hawlgalin doonaa isla markaana lacag bixinta ayaa lagu bixin doonaa isla habka aad lacag bixinta ku bixisay. Lacag celinta oo dhan waxaa lagu sameeyaa ikhtiyaarka stopsafeschools.com.
stopsafeschools.com waxaa laga yaabaa inay waqti ka waqti ku bixiso websaydhkeeda, xiriiriyeyaasha websaydhada kale, xayeysiinta iyo macluumaadka websaydhadaas si ay kuugu habboon yihiin. Tan micnaheedu maahan inay ka dhigan tahay kafaala qaadid, oggolaansho, ama oggolaansho ama heshiis u dhexeeya stopsafeschools.com iyo milkiilayaasha websaydhadaas. stopsafeschools.com masuul kama aha wax kasta oo ka mid ah waxyaabaha laga helo bogagga internetka ee lala xiriiriyo.
stopsafeschools.comWebsaydhka waxaa ku jiri kara macluumaad ama xayeysiis ay bixiyeen dhinac saddexaad kaas oo loogu talagalay stopsafeschools.comma aqbalayso wax masuuliyad ah wixii macluumaad ah ama talo ah ee ay si toos ah kugu siinayaan dadka saddexaad. Waxaan sameyneynaa 'talo bixin' keliya mana bixineyno wax talo ah mana qaadanayno wax mas'uul ah wixii talo ah oo ku saabsan arrintan.
Inta ugu badan ee sharcigu oggol yahay, stopsafeschools.com gabi ahaanba waxay baabi'isaa dammaanadaha oo dhan, oo la muujiyaa ama la saameeyay, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, dammaanad qaadyada la macneeyay ee ku saabsan badeecad-iibinta iyo taam ahaanshaha ujeeddo kasta oo gaar ah. stopsafeschools.com ma siinayo wax dammaanad ah in dukumiintiyada, alaabada ama adeegyada ay ka madax banaanaan doonaan khaladaadka, ama ciladaha la sixi doono, ama in websaydhkeena ama kombuyuutarradiisu ayan ka madax banaaneyn fayraska ama waxyaabaha kale ee waxyeelada leh.
In kasta oo aan, markasta ku dadaaleyno in aan helno macluumaadka ugu saxsan, la isku halleyn karo oo cusboonaysiinta ku saabsan websaydhkeenna, kamaanaan damacsaneyn ama kama sameynno wax matail ah oo ku saabsan isticmaalka ama natiijada isticmaalka dukumiinti, wax soo saar, adeeg, isku xirka ama macluumaadka boggeeda ama sida saxda ah, ku habboonaantooda, saxnaanshahooda, kalsoonidooda, ama haddii kale.
Waa masuuliyadaada kaliya ee maaha masuuliyada stopsafeschools.com in lagu qaado wixii iyo kharashkii adeeg, hagaajin, ama sixitaan. Sharciga lagu dabaqi karo ee ka jira dowlad-goboleedkaaga ama taritorigaaga ma oggolaan karo ka-reebitaannadaas, gaar ahaan ka-saaridda dammaanaddaha qaarkood ee ku xusan. Qaar ka mid ah waxyaabaha kor ku yaal ayaa laga yaabaa inaysan ku quseyn laakiin waa inaad hubisaa inaad ka warqabaan halista aad ku dhici karto adoo adeegsanaya websaydhkan ama wixii alaabo ama adeeg ah ee lagu soo bandhigi karo. Adiga ayaa mas'uul ka ah inaad sidaa sameysid.
At stopsafeschools.com, waxaa naga go'an ilaalinta asturnaantaada. Waxaan u adeegsanaa macluumaadka aan kaa aruurineyno si aan sare ugu qaadno adeegyada aan ku siineyno. Waxaan xushmeyneynaa asturnaanta iyo qarsoodiga macluumaadka aad adiga bixisay waxaana u hoggaansannahay mabaadi'da asturnaanta Australia. Fadlan si taxadar leh u aqri Nidaamkeena Asturnaanta.
Waad baddali kartaa faahfaahintaada waqti kasta adoo ku talinaya qoraal ahaan emayl ahaan. Dhamaan macluumaadka aan ka helno macaamiisheena waxaa ilaaliyaya adeegayaasheena badbaadsan. stopsafeschools.comBarnaamijka kumbuyuutarka ee aaminka ah ee kombuyuutarrada leh wuxuu kaydiyaa dhammaan macluumaadka macaamiisha ka hor inta aan annaga noo dirin. Intaa waxaa sii dheer, dhammaan macluumaadka macaamiisha la soo uruuriyay waxaa laga ilaaliyay adeegsiga ama rukhsaynta aan loo fasaxin. Macluumaadka kaarka deynta laguma keydin karo khiddeena.
Kuma iibin karno mana ku iibin doonno macluumaadka shaqsiyeed ama macaamil. Si kastaba ha noqotee waxaan u adeegsan karnaa guud ahaan iyada oo aan loo tixraacin magacaaga, macluumaadkaaga si loo abuuro tirakoob suuq geyn ah, loo garto baahiyaha isticmaaleyaasha iyo kaalmaynta buuxinta baahiyaha macaamiisha guud ahaan. Intaas waxaa sii dheer, waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka aad bixiso si aan u hagaajino degelkeena iyo adeegyadeena laakiin uma adeegsano adeegsiga kale.
stopsafeschools.com duruufo gaar ah ayaa loo baahan karaa, in lagu siidaayo macluumaadka si niyad wanaag ah iyo halka stopsafeschools.comwaxaa looga baahan yahay in sidaas la sameeyo duruufaha soo socda: sharci ama maxkamad kasta; in la dhaqan geliyo shuruudaha heshiisyada macaamiisheenna; ama in la ilaaliyo xuquuqda, hantida ama badbaadada macaamiisheena ama dhinacyada seddexaad.
Haddii aad ku sugan tahay meheradda aad ku abuurayso dukumiintiyo la mid ah, alaabo ama adeeg ujeedooyin ah inaad siiso lacag khidmadood kuwa isticmaala, ha noqdeen isticmaale ganacsi ama isticmaaleyaal guri, markaa waxaad tahay tartame stopsafeschools.com. stopsafeschools.com si cad ayaa looga saarayaa mana kuu ogolaaneyso inaad isticmaasho ama aad gasho websaydhkaaga, inaad kala soo baxdo wixii dukumiinti ah ama macluumaad ah boggeeda internetka ama aad ka hesho dukumiintiyada noocaas ah ama macluumaadka iyada oo loo marayo qolo saddexaad. Hadaad jabiso ereygan markaa stopsafeschools.com wuxuu kugu wareejin doonaa mas'uuliyad buuxda wixii khasaare ah ee aan ku sii wadno waxaanan kugu sii xisaabtami karnaa dhammaan macaashka aad ka heli karto isticmaalka noocan ah ee aan la isticmaalin ama aan habooneyn. stopsafeschools.com wuxuu xaq u leeyahay inuu ka saaro ama u diido qof kasta inuu galo websaydhka, adeegyada ama macluumaadka ku jira go'aankeenna keliya.
XUQUUQDA, TRADEMARK IYO XAALADAHA XAQIIQADA
Websaydhkan waxaa ku jira waxyaabo ay leeyihiin ama noo leysan yihiin. Agabkan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, naqshada, qaabka, muuqaalka, muuqaalka, calaamadaha ganacsiga iyo sawirada. Lama oggola inaad dib u soo saarto dukumentiyada, macluumaadka ama agabyada websaydhada ujeeddooyinka iibka ama isticmaalka dhinac saddexaad. Gaar ahaan looma oggola inaad dib-u-daabacdo, u shubto, si elektiroonig ahaan ah ama si kale u dhigto ama aad u qaybiso agab kasta, dukumiinti ama alaab kasta oo laga heli karo kala soocidda waqti ka waqti waqti ka wakhtiga shabakaddan.
stopsafeschools.com waxaan si cad u xafideynaa dhamaan xuquuqda daabacaada iyo astaanta ganacsiga dhamaan dukumiintiyada, macluumaadka iyo waxyaabaha kujira websaydhka waxaan xaq u leenahay inaan tilaabo kaa qaadno hadii aad jabiso shuruudahan midkood.
Dib-u-qaybin ama soo saaritaan qayb ama dhammaan waxyaabaha ku jira qaab kasta waa ka mamnuuc wixii aan ahayn kuwa soo socda: waad daabacan kartaa ama kala soo bixi kartaa degello disk adag oo maxalliga ah oo ku saabsan isticmaalkaaga shaqsi iyo ganacsi aan ahayn; iyo waad u nuqulsan kartaa nuxurka qaybaha saddexaad ee shaqsiyaadka si ay u isticmaalaan shaqsiyadooda, laakiin kaliya haddii aad u qirato websaydhka inuu yahay isha maaddada.
Waxaa laga yaabaa inaadan ahayn, marka laga reebo fasax qoraal ah oo qoraal ah, u qaybisid ama ganacsi ahaan u istcimaalaan content. Sidoo kale ma gudbin kartid ama ku keydin kartaa shabakad kale ama qaab kale oo nidaamka dib-u-helidda elektarooniga ah.
Shuruudahan iyo shuruudahani waxay ka dhigan yihiin heshiiskii u dhexeeyey adiga iyo stopsafeschools.com ku saabsan isticmaalkaaga iyo marin u helkaaga stopsafeschools.comWebsaydhkaaga iyo isticmaalkaaga iyo marin u helka dokumentiyada iyo macluumaadka ku yaal. Waqti kale oo aan lagu dari doonin heshiiskan marka laga reebo halka looga baahan yahay inuu ku daro sharci kasta oo Dawlada Dhexe ama Gobol ama Territori kasta. Dhamaan ereyada lagu xusi karo marka laga reebo kuwa ku qeexan qaanuunka oo aan si cad looma reebi karo waa kuwan si cad looga reebay.
SAAMAYNTA SHURUUDAHA FARSAMADA
Halka qodob kasta ama erey kasta oo ka sarreeya uu ku mutaysan karo sharci kasta oo lagu dabaqi karo inuu yahay sharci darro, madhan yahay, ama aan lagala dhaqmi karin Gobol ama Territori ka dib faqraddaas oo aan lagu dabaqi doonin Gobolka ama Territoriga oo loo arko in aan waligeed lagu soo darin shuruudahan iyo shuruudaha Gobolka ama Territoriga. Xeerarka noocan ah haddii sharci ahaan lagu fulin karo Gobol kale ama Territor kasta wuxuu sii ahaan doonaa mid si buuxda loogu fulin karo qaybna ka ah heshiiskan Gobollada iyo Degmooyinka kale. Ka reebitaanka erey kasta oo ku xusan faqradan ma saameyn doonto ama wax kama beddeli doonto dhaqan gelin buuxda iyo dhisidda qodobbada kale ee shuruudahan.
Heshiiskan iyo degelkan waxaa ku waajib ah qaanuunka VICTORIA iyo Australia. Haddii uu jiro khilaaf u dhexeeya adiga iyo stopsafeschools.com taas oo keenta in maxkamad la soo taago markaa waa inaad u gudbisaa xukunka maxkamadaha VICTORIA.